Ingelosi Eyinkulu Raziel - Imfihlelo kaThixo
by Eileen Anglin, Angel Intuitive
Umgcini woBulumko kunye nolwazi
Biza kwi-Archangel Raziel xa ujongene nemiba yomthetho, ekuphelelwe lithemba, okanye ukuziva ulahlekile ngokomzwelo. Ungumgcini wobulumko nolwazi.
Ngenxa yexabiso elininzi lolwazi, zombini kunye nakwezinye izizwe, uRaelel, phakathi kwezinye izinto, uyenzeka nokuba ngumgcini womthetho. Ngoko ke ukuba ngaba unomngeni kule migudu yobomi, buyela kuRaelel ukuze uncede, ngakumbi xa ufuna ubulumko nokuqonda xa wenza izigqibo kunye nokukhetha
Ubomi maxa wambi bunokuziva ngathi ukhonjwe ngaphakathi kwindlela yokutya emnyama kunye nesitimela sihamba ngokukhawuleza. Abanye bathi "ubusuku obumnyama bomphefumlo." Wonke umntu ufumana oku ngethuba lokuphila kwabo. Nangona kunjalo, ngokuphindaphindiweyo amaxesha okuzalwa kwakhona, kuza kuza kugqitywe kunye nobunzima kunye neentlungu. Mhlawumbi kuthatha lolu hlobo lokugubha ukuze luqhubeke nomphefumlo kwaye lufumane ubulumko.
Igama likaRaziel libhekisa Imfihlo kaThixo . Ungumgcini wobulumko nolwazi, kuquka iimfihlakalo zamagqirha okanye ulwazi olufihliweyo. Unako ukusinceda sibe nengqiqo yemfundiso yeemfundiso zendalo kunye nolwazi olunzulu.
Ukuba Isisithi EsiCacileyo Sesikhokelo SikaThixo
Xa unqwenela ukuqinisa amandla akho okubona, ukuva, ukuva okanye ukuba nolwazi oluphezulu, u-Raziel unokukunceda ngokwenza umzila ocacileyo okhokelo lukaThixo.
URaziel unomoya ofihlakeleyo ngaye. Oku mhlawumbi ngenxa yokuba udibaniswa nomlingo, i-alchemy kunye nokubonakalisa kunye ne-Universe.
Kwam, unxibekile kwi-jewel ejulile njengemibala enombala obomvu nebomvu. Amandla akhe kubonakala ephuma kwizinto endibiza ngokuba yi "Grid" uze ungene kuyo uze wazi konke Oku.
Yintoni efihliweyo Ulwazi?
Imilingo inokuthi ichazwe njengento efihliweyo, eyimfihlelo, okanye ingabonakali. Igama elithi "ubuqhetseba" luye lwaba yinto ecacileyo, eyimfihlelo, kunye nezenzo ezingasemhlabeni kunye nezifundo.
Nantoni na into "engaqondakaliyo" idlalwa njengento yokusebenzelana nemimoya.
Amathala eencwadi ayetyenziselwa ukuba neCandelo leMimoya apho unokuhlolisisa iincwadi malunga nokuhambisa, ukusebenzisana, ukubhula ngezinkanyezi, ukubhaliswa kwamanani, njl. Namuhla, uya kuphawula ezi ntlobo zokufumanisa kunye neemibhalo eziyimfihlakalo zitholakala kwiNew Age, eParanormal, Metaphysical, naku-Self Help sections.
Izikolo ezifihlakeleyo zavela kwizifundo zamagqirha, ezitsalathisa izizukulwana zabafundi kunye nabafunayo abanomdla ekufundeni ngezifundo zokomoya, kubandakanywa nezihloko zeemvelo.
Inkcazo: I- Metaphysical ibhekisela kwizifundo ezingekho ngokomzimba okanye ezingekho ngokwemvelo. Izihloko ezichazwe njenge-metaphysical zibandakanya ukubonakaliswa kwe-astral , ukuphindaphinda kwakhona, ukubhula ngezinkanyezi, ukuhanjiswa kwamashishini angokomoya, ukuphupha kwamanye amazwe kunye nabanye.
I-Gehry iphendula ukuCima ukuCamngca - Akunakuyiphutha lakhe
Umdibanisi - ukudibana
I-Mississippiya - i-Mound Builders ne-Horticulturalists yaseMntla Melika
Amagama eKhemikhali weZinyango eziqhelekileyo
UFelix Trinidad Ukulwa neNkcazo yeMisebenzi yokuLwa